पाँचथर । डिभोर्स शब्द सायदै कसैलाई प्रिय लाग्ला । सबै बिबाहित जोडीले डिभोर्सलाई एक एटम बम जसरी लिएका हुन्छन। जस्को घरमा डिभोर्स नामको बम खस्छ त्यो घर ध्वस्तै हुन्छ भनेर सबै जना तर्सिएका हुन्छन। समाजमा कसैले डिभोर्स गरेको थाहा पाए भने बिचराको पात्र बनाएर च्व… च्व…. च्व… गरेर सान्त्वना र दयाको भावनाले हेर्छन।
बिचरा फलानीले त डिभोर्स गरिछ, बच्चा पनि छन, अब के गरेरखान्छे होला? बिचरी को भाग्यनै फुटेको रहिछ,अब पाउनु दुख पाउनी भै भनेर जमघटको बेलामा फलाकी रहेका हुन्छन। बिचरा बाउआमादाजु भाईहरु युद्द हारेको सिपाही झै छाति सुकाएर र शिर शिर झुकाएर हिडेका हुन्छन। मानौ उनीहरुको छोरी वा दिदी बैनीले उनीहरुको मुखमा कालो पोति दिई वा उनीहरुको ईज्जत ,मान र प्रतिष्ठा त्यही डिभोर्स रुपी एटम बममा अडकेको थियो जुन फुटे पछि सबै झ्वाम भयो।
तर बिडम्बना पुरुषहरुलाई घर, आफ्न्त र साथीभाईबाट फुल सपोर्ट मिलिरहन्छ, उनीहरु भन्छन जे भयो राम्रै भयो काली गए गोरी आउछन, चिन्ता नगर त्यो नकचरीको अगाडी त्यो भन्दा राम्री र झन कन्य केटी खोजेर झ्याम झ्याम पन्चे बाजा ठोकेर बुहारी भित्र्याउछौ भनेर पुरा गर्बका साथ छाति ठोकी रहेका हुन्छन तर महिलालाई चै चारैचिरबाट मुखै फोरेर नभने पनि अलि सहेकी भए हुन्थ्यो , घर छोडेर हिडीहाल्न चै नहुनी भनेर घुमाउरो पारामा दोषी मानिरहन्छन।
सबै कुराको दुई पक्ष हुन्छन, एक राम्रो पक्ष र अर्को नराम्रो पक्ष। सबै डिभोर्स नराम्रो हुदैनन, धेरै डिभोर्सहरुले तपाईको छोरीको ज्यान बचाएको हुन्छ। नर्कबाट उद्वार गरेको हुन्छ। उनीहरुलाई झन राम्रो अवसर मिल्न पनि सक्छ। आँसुको पोखरीमा डुबेर र ज्यानको बाजी लाएर घरको ईज्जत बचाउने ठेक्का छोरीहरुको मात्रै हो? आफ्नो प्राण भन्दा बाउ आमाको ईज्जत ठुलो ठानेर धेरै छोरी चेलीहरुको ज्यान अनाकहमा गएको छ। माईतबाट वा समाजबाट समयमा सपोर्ट र असल काउन्सेलिङ पाएको भए धेरै छोरीचेलीहरु आज तपाई हाम्रो सामु हुन्थे।
पुरुषबिना महिलाहरुको अस्तित्व हुदैन र श्रीमानले छोडेमा श्रीमतीले दुख पाउछन भन्ने डर परापुर्बकाल देखी हाम्रो पुरुष प्रधान समाजले हाम्रा छोरीचेलीको मष्तिष्कमा ठोकि दिएको छ। महिलाहरुको सबै भन्दा ठुलो डर भनेकै डिभोर्स गरे भने कसरी बाँच्ने ? धेरै माईतीमा बस्नपनि नमिल्ने, बाहिर एक्लै बस्दा सामजिक असुरक्षा तथा जिबिका पार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई मनो बैज्ञानिक तरिकाले गहिरो असर पारिरहेको हुन्छ र जतीसुकै अन्याय र दमन पनि सहेर बसिरहेका हुन्छन। जंगलको राजा मानिने सिंहलाई पनि सानै देखी चिडिया घरमा थुनेर राखेको भए सिंहले शिकार गर्न जान्दैन , सक्दैन, जंगलमा खुल्ला घुम्ने सिंहले के के गर्न सक्छ त्यो मैले यहा भनिरहन पर्दैन होला। महिलाहरु भनेका चिडिया घर भित्र थुनिएका सिंहनी जस्तै हुन।
पुरुषले बाहिर जागीर र ब्यापार गरेर धन आर्जन गरेर घर चलाउने गर्छ, प्राय:जसो महिलाहरुले जे समान किन्नु पर्दा पनि श्रीमानकोअगाडी हात फैलाउनु पर्छ। कहिले काही त नमिठो बचन पनि खानुपर्छ तर महिलाहरु खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, घरको सरसफाई, परिवारहरुको लुगाधुने, बच्चाहरु पनि हेर्नै पर्यो, बेलुका श्रीमनालाई पनी खुशी पार्ने पर्यो। सबैकाम गर्दा पनि एकसुको तलब पनिपाउदैनन, आफ्ना घरमा पनि कस्ले तलब लिन्छ भन्नुहोला तर महिलाहरुको आफ्नो घर त केवल मुखले भन्ने मात्रै हो। उनीहरुको नाउँमा नत घर हुन्छ नत एक धुर जग्गानै तर पनि महिलाहरुले सबैलाई आफ्नो मानेर र उनीहरुको सम्पतिलाई आफ्नो ठानेर बसेकी हुन्छन। त्यै पैसा नकमाउने भनेर हेपीएका हुन्छन। तर जुन महिलाले पैसा कमाउछन ति महिलाहरुको समाजमा र परिवारमै ठुलै ईज्जत र दबदबाहुन्छ । जति ठुला कुरा गरे पनि महिलाहरु हाम्रो समाजमा अझै पनी हेपिएका छन, पिल्सिएका छन,दबिएका छन। यो कहा जान्छे र यस्लेके नै गर्न सक्छे र भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिएको पुरुष प्रधान समाजको जालोलाई डिभोर्सरुपी बम हानेर ध्वस्त नबनाए सम्म महिलाहरुसधै पिडीता रहने छन।
चर्चित मोडेल,एंकर तथा नायिका रिमा बिश्वकर्मालाई नचिन्ने सायदै होलान, उनको बिहे लंडन निवासी रोबर्ट बिश्वकर्मासंग नेपालको तारे होटलमा धुमधामसंग भएको थियो, दुई बर्ष पनि नपुग्दै उनीले डिभोर्स दिएर हिडीन। युकेको केटो, एकदुई बर्ष अझै सहेको भए उतैको रातो पासपोर्ट पाउथिन, जिन्दगी मज्जाले कट्थ्यो भन्नेहरु पनि होलान तर गज्जबको कुरा डिभोर्स गर्दा उनले रोबर्टको एक पाउन्ड पनि नलिई लात हानि दिईन। उनको यै कुराको म ठुलो प्रशंक पनि हु। रोबर्टले गरेको अपमान र चोट एउटा लिमिट क्रस गरेपछि एक मिनेट पनि संगै बस्न चाहिनन। डिभोर्स पछि उनको करियर दिनानुदिन चम्किदै छ। उनी झन सफल हुदैछिन। अहिले रिमाको कम्पिटेटर केवल उनी आफै हुन। रिमा जस्तो साहसी महिला यो समाजका लागी रोल मोडल हुन सक्छन।
प्रियंका कार्की पनि अमेरिका निवासी रोचक मैनालीसंग बिहे गरेर संसारको ड्रिमल्यान्ड अमेरीका सेटल भएकी थिईन उनले पनि दुई तिनबर्षमै रोचक संग डिभोर्स गरेर अमेरीका छोडेर नेपाल आएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही समय एकक्षत्र राज गरिन। अहिले आएर काठमाडौकै धनाढ्य परिवारमा उनको बिहे भएर सफल जिन्दगी बिताई रहेकी छन। उनका श्रीमान नायक आयुषमान जोशी हुन ।
अनुराधा कोईरालालाई नचिन्ने को होला? माईती नेपालकी जन्मदाता तथा सिएनएन हिरो । उनले पनि पति दिनेश प्रसाद कोईरालासंग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर माईती नेपाल जन्माएर उनले अहिले सम्म १२०००( बार्ह्र हजार) महिला तथा युवतीहरुलाई उद्वार गरिसकेकी छन।उनका अनुसार उनका श्रीमान बाहिर बढी लहसिन्थे। त्यो सहन नसकेर उनले दिनेसलाई छोडी दिएकी थिईन। उनले श्रीमनले जे गरे पनी सहेर बसेको भए आज मेरो लेखमा उनको नाम उठदैनथ्यो किनकी उनलाई कसैले चिन्दैनथे।
अर्की पात्र मिना ढकाल जो हास्य कलाकार मनोज गजुरेलकी भुपु श्रीमती हुन। मिना ढकालले आफ्नो हुर्की सकेको छोरा छोरी र २२ बर्षको बिबाह तोड्नु त्यति सजिलो थिएन, सानो तिनो हिक्मत र साहसले यो उमेरमा आएर डिभोर्स गर्न कसैले पनि सक्दैन । दुनिया हँसाएर हिड्ने मनोजले आफ्नै श्रीमती रुवाएको पाटो यो समाजले देखेको थिएन, मिनाले बेला बेलामा टिभिका अन्तरबार्ताहरुमा, टिकटोक र फेसबुकमा क्रमश बाहिर ल्याउदै छिन। उनले आफ्नो त्यो पट्यास लाग्दो र निरस जिबनलाई लात हानेर आफैले पौरख गरेर खाएकी छिन। अहिले उनले आफ्नै बुटिक चलाएर शानसंग जिबन काटेकी छिन।
रबिना देशराज जो कर्रपोरेट लेबलमा कहलिएको नाम हो, मेघा बैककी डेप्युटी चिफ एग्ज्युकेटीभ हुन, उनी बार्षिक करोडौ रुपिया त तलब मात्रै थाप्छिन, उनले भबेश जोशीसंग बिहे गरेकी थिईन तर कुरा नमिले पछि दुई छोराकी आमाले डिभोर्स गरेर आफ्नो ब्यबसायीक क्यारिएर सुरु गरेकी रबिना अहिले एक सफल महिला उधमी बनेकी छिन। असल आमा पनि साबित भईसेकी छिन र पहिल्यै बिबाह गरेसकेकी नायिका प्रियंकालाई बुहारीको रुपमा भित्र्याएर उदार भावानाकी नारीको रुपमा आफुलाई परिचित गराउदै , परम्परागत तल्लो सोचको चुनौतीलाई पनि पाखा लाएर समाजमा एक असल नजीरको शुरुवात गरेकी छिन। उनी नायिका प्रियंका कार्कीकी सासु र नायक आयुषमानकी आमा हुन।
“नबिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई”गीतकी गायिका अन्जु पन्तले मनोजराज शिवाकोटी संग बिहे गरेकी थिईन, उनीहरुको हुर्की सकेकी एक छोरी पनि छिन तर बिबिध कारणले गर्दा उनीहरुके डिभोर्स हुनपुग्यो । अहिले अन्जुले थिर कोईराला नामका एक पाष्टरसंग बिहे गरेर रमाउदै हिडेकी छिन। जिबनको पानमा कहि पनि पुर्ण बिराम लाग्दैन, केवल नयाँ नयाँ अध्याय थप्दै जानी हो।
रेखा थापाको नाम लिने बित्तिकै उनको चलचित्र “हिम्मतवाली” को याद आउछ, उनी साच्चिनै हिम्मतवाली नारी हुन। छबि ओझा संगदशकौ लामो सम्बन्ध तोडेर उनले आफ्नै दुनियामा रमाउदै छिन । त्यसपछि पनि उनले आफ्ना लगानीमा चलचित्र निर्माण गर्ने देखी लिएर राजनितिमा पनि आफ्नो भाग्य आजमाउदै आएकी छिन। डिभोर्स पछि उनिले छबि ओझाले उनको नाउमा किनिदिएको घर पनि फिर्ता गरिदिएकी थिईन।
त्यसैले डिभोर्स गर्दैमा संसार सकिदैन । आकास खस्दैन तर अन्याय र पिडा सहेर बस्नुभयो भनी एकदिन तपाईको जीबन खस्न सक्छ। महिलाहरुको हक र हितको सुनिश्चितता भएको अमेरिकामा तथा पश्चिमा देशहरुमा सन २०२१ मा ४५%, युकेमा ३३%, फ्रान्समा ५०%, क्यानाडामा ४०% ईटाली ४८% जोडीहरुको डिभोर्स भएको थियो।
मान सम्मान, हक अधिकार चुलो चौका र जुँठो भाँडा माझ्दैमा पाईदैन, आवाज उठाउनु पर्छ,लडनु पर्छ। नरोई, नकराई त आफ्नै आमाले पनि दुध ख्वाउदिनन। झन सदियौ देखी पुरुषहरुले राज गरेकोदेशमा त्यसै अधिकार पाईने दिवा स्वप्न नदेखे पनि हुन्छ ।
बिहेमा छोरी अन्माएर पठाउदा “पाले पुन्य मारे पाप” भनेर होईन “सुख दिए फलिफाप, दुख दिए अभिशाप, खबरदार “भनेर पठाउनुपर्छ। आत्मबिश्वास र हिम्मत यस्तो चिज हो नि संसारमा कुनै पनि असम्भब कामलाई सम्भब बनाई दिन्छ।
हामीले हाम्रो छोरीचेलीहरुलाई बिहेमा दाईजो संगै अलिकति हिम्मत ,आत्मबिश्वाश, साथ र हौसला मात्रै दिए पनि उनीहरुले संसार जित्न सक्छननारीहरुकमजोर हुदैनन।
उनीहरुलाई हाम्रो समाजले हात खुट्टामा जन्जीर बाँधी दिएर पुरुष संगको दौडमा होमीदिएर मात्रै पछि परेका हुन नत्रपुरुष भन्दा कुनै कोणबाट कम छैनन। मैले यहा डिभेर्सलाई बढावा दिएको होईन तर परि आएको खन्डमा डिभोर्स दिन पनि पछि पर्नुहुदैन।
डिभोर्स भनेको चिकित्सक बिज्ञानको एम्प्युटेट जस्तै हो। दुर्घटनामा परेको ब्यक्तिको समयमै हात वा खुट्टा काटेर फालेन भने पुराशरिरमा ईन्फेक्शन फैलिएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ। त्यसरी नै बिग्रीएको वा थिचिएको सम्बन्धमा समयमा डिभोर्स गरिएन भने ज्यान जानुको साथै दुबै तिरको परिवारको सुख, शान्ती र खुशी तहस नहस हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। साभार इनेपालिज डटकम ( नबिन बिक )